सिस्नोपानीको धेउसीमा सि चीनफिङ बनेर के-के भने मनोज गजुरेलले ? (भिडियो सहित) - www.dthreeonline.com
सिस्नोपानीको धेउसीमा सि चीनफिङ बनेर के-के भने मनोज गजुरेलले ? (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक १३, २०७६ समय: २०:३७:१९
ईटहरी/ झिलिमिली तिहारको समयमा समूह बनाएर धेउसी खेल्दै रमाईलो गर्ने प्रचलन रहि आएको छ । यस्तै एउटा पुरानो हास्यकलाकारहरुको समूह सिस्नो पानी नेपालले विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि व्याङ्ग्यात्मक देउसी खेलेको छ । देउसीमा यस पटकको आकर्षण चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ बनेका छन् । हेर्नुस् भिडियो ।
हास्यकलाकार मनोज गजुरेलले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उनले बिभिद बिषयमा कमेडी प्रस्तुति दिएका छन । सँगै देउसीमा राजनीति, समाज र तिनका प्रवृतिमाथि चर्को व्यंग्य गरिएको छ । प्रज्ञा भवन काठमाडौमा सम्पन्न धेउसी कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम् ले उद्घाटन गरेका थिए ।
उक्त कार्यक्रममा नक्कली ओलीको रुपमा सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ प्रस्तुत भएका थिए । उनको प्रस्तुतीकरणले पनि उपस्थित कोहि नहासी बस्न सकेनन् । उद्घाटन कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’देखि सबै दलका शीर्ष नेतासँगै विशिष्ट व्यक्तित्वको सहभागीता थियो । यसपटक भने राजनैतिक बिषयमा खरो व्यंग्य गर्ने शैलेन्द्र सिम्खडालाई भने सिस्नोपनि टिमबाट हटाईएको थियो ।
निक्की संग्रौलाको ‘किन बस्यौ’ गीतबाट म्युजिक भिडियोमा डेब्यु (फोटो फिचर सहित)
काठमाडौं/ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको अघोरी बाबा भनेर चिनिने विजय केसीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । ...
सोसल मिडियामा देखियो अभिनेत्री केकी अधिकारीको बोल्ड अवतार (फोटो सहित)
ईटहरी/ अभिनेत्री केकी अधिकारीले जाडो सुरु भइसकेको बेला इन्स्टाग्राम तताएकी छिन् । उनले इन्स्टाग्राममा केही बोल्ड तस्वीरह...